Oo-Obamas bathenga nje ikhaya kwiMdiliya kaMartha - Indlela Yokuphila
Oo-Obamas bathenga nje ikhaya kwiMdiliya kaMartha
PETE SOUZA / INDLU EMHLOPHE
Akunakubakho usapho oluqonda ngcono ngokubaluleka kwe- iholide -Ekukho ngokukodwa okubandakanya ulwandle, ukukhwela ibhayisekile kunye nokuzimela-kunokuba Obhama. Usapho lokuqala lwangaphambili kudala lutyelele rhoqo kwi-Vineyard kaMartha-babethathe ikhefu kwisiqithi esithandwayo saseMassachusetts kangangeminyaka esixhenxe yesibhozo sikaMongameli wangaphambili njengomongameli. NgoLwesithathu, olu sapho lwenza indawo oluya kuyo lweholide kwindawo entsha yokubiza ikhaya, ngokuthenga umhlaba kaMartin's Vineyard.
Kwasekuqaleni kwehlobo, ii-Obamas zaqesha ikhaya ekubhekiswa kulo ngexesha lokuzalwa kukaMongameli wangaphambili. Indawo yokuhlala engaphambi kwamanzi, eyakhiwa ngo-2001, yathengiswa nge-11.75 yezigidi zeedola kwi-trust, Ngokutsho kwaBantu . Lo mhlaba wawudweliswe kwi-14.85 yezigidi zeerandi kwaye yayiyekaWycliffe Grousbeck, umnini weBoston Celtics, kunye nowayesakuba ngumfazi wakhe uCornnie Basler Grousbeck.
Amagama abhalwe nguJames F. Reynolds, ibhanki yotyalo-mali yaseChicago kunye nomhlobo wakudala kaMongameli Obama, njengetrasti. Ngexesha lonyulo luka-2008 luka-Mongameli, uReynolds wakhonza njengelungu lekomiti yezemali ka-Obama. Ngokwe- IGazethi yeGadi yeZidiliya , ikhaya lenziwe nguBrandenburger Taylor Lombardo Architects eSan Francisco.
Ipropathi ye-Martha's Vineyard eyi-6,892-square-foot inyawo ihleli kwiihektare ezingama-29.3 kwaye ineendawo zokulala ezisixhenxe, iibhafu ezisibhozo ezinesiqingatha, kunye nendawo yokubasa ngamatye. Ikwanayo ne-boathouse, indawo yokubeka ilanga, iphuli, kunye namaphiko amabini eendwendwe. Indlu yokuma ibekwe kwidolophu yesiqithi i-Edgartown kwaye ineelwandle zabucala kunxweme olujikelezileyo.
Ii-Obamas zikwanekhaya elinamgama amabini eekhilomitha ukusuka Indlu emhlophe eKalorama, ebelikhaya likaWoodrow Wilson, uWilliam Taft, noFranklin D. Roosevelt.
ukuhonjiswa kwekrisimesi okulula
Iimpawu zekrisimesi zokwenza
Ikrisimesi yeediliya yodongwe